Unogona kundikurudzira dzimwe nzvimbo dzakanaka here kuti ndiparadzise huwandu hweP PR hwese hwemashure?
Zvechokwadi, kuwana hukama kubva kumasimba makuru uye mhepo yakasimba yeRepublicRank semapepanhau enyika kana kunyange mapurisa ehurumende pasi rose haafaniri kuregererwa. Iyi inzira yakanaka yekuvandudza purogiramu yako yeWebhubhu kana yebhurogi yepamusoro yeP PR yemashure e-backlinks, asi basa rinozivikanwa sechinhu chinonyatsopedza nguva uye kushanda nesimba. Kunyange zvakadaro, nechinguva chiduku chekugadzirisa mupfungwa, unogona kutora zviri nyore nyore zvimwe zvekare kumashure kuti uvandudze iwe wakatove uripo PR PR profile ye backlinks. Zvimwe-zvichida iwe wakatova nemamwe shreds ehutano hwehutano kana hufumi huripo hunodiwa kune izvozvi. Pasi pandinoenda kukuratidzai nzvimbo dzakanaka uye nzvimbo dzakakodzera kufungidzira kuti mubatanidzwe ne. Mushure mezvose, iyo ingadai iri mukana mukuru wekubatana pamwe pamwe nemamwe mabhuku ezvitendero uye ehurumende anovimbiswa. Chero zvazviri, zvikamu zviviri izvi hazvidi kuti zvive nehuwandu hwebhadha mari kana nguva yakawanda. Zvechokwadi, kana yakashandiswa zvakanaka.
Local Governmental Sites
Pakati pevamwe, mawebsite evanhu vemunharaunda uye munyika yose kana mablogi anotsigira ane ruzivo rweGOTV ruzivo rwemashoko ndiwo mashoma aya masimba uye pakupedzisira akakwirira DA (chiremera chechiremera) chikwata chichirova chikamu chemazana zana muzere. Kucherechedza kuti munhu haagoni kubudirira mukuvandudza hukuru hweP PR hwemashure endangariro neaya anobva kuhurumende huru, pane mamwe mikana achiripo pane. Ndinoreva kuti nzvimbo dzakawanda dzehurumende dzemunharaunda dziri kushandisa mabhizimisi zvinyorwa kuti dzishandise kukurudzirwa kwepaInternet kumakambani ezvemukati munzvimbo yavo. Nhoroondo dzehurumende dzemunharaunda ingangodaro nzira inonyanya uye yakakurumidza kubata zvimwe zvinyorwa zvemashure zvakasimba zvine chokuita newebsite yako kana blog.
Dzidzo (Yunivhesiti / Chikoro) Mapeji
Chikamu cheshumba chemitambo yezvidzidzo chinovimbwa chinozivikanwa kuti ine mawebsite DA ane makore 90-95 (based pane kuongorora kwechangobva kuitika). Asi chinhu chakanyanya kuoma ndezvekuti uwane chinangwa chakanaka chekufambisa. Chokutanga pane zvose, edza kuita kuti vawane nyasha - tsvaga vanhu vakarurama vamunoziva sevaimbova vadzidzi kana vashandi. Tichifunga kuti masayunivhesiti uye makoroji nguva dzose vanoda kuratidza, shandisa izvozvi kuti zvive zvakanaka - kungovapa ivo kubudirira chaiwo nyaya, maitiro makuru emabasa, kana kuti mibvunzo yakatsvaga yavanoda kuona, panguva imwechete inovandudza your PR PR profile ye backlinks ne mhando mbiri dzechangobva kushandiswa mukudzoka. Chii chinowedzera - kuwana mari inoshandiswa shure kuburikidza neyunivhesiti kana chikoro chesekondari mapeji mapeji, iwe uri kushandisa kamwe mukana wekutaura nebhizimisi rako rezita kana kuti kuwana pachena zvakanyanya mukati mekambani yako yekambani uye niche yemisika.
Kana pasina chinhu chichibatsira, heino imwe nzira yakasiyana yekugadzirisa zvakanaka kusvika kune vunivhesiti kana mamwe masangano ezvidzidzo - izvo zvinonyanya kushanda kuti uwane humwe humwe hunokosha. Zvose zvaunoda ndezvipi kuti uve nechigadzirwa kana basa rinokosha kune vadzidzi vemo, kana vashandi. Ingoedza kugovera, somuenzaniso, imwe chete yekodzero kemo. Panguva imwecheteyo, iyo inenge iri nzira yakanakisisa yokugadzirisa zvikamu zvizhinji, zvinotungamirira, kubhadhara uye kutaura pamusoro pehuwandu hwemashoko evanhu - kunze kwemashoko edu makuru ekutsvaga. Cherechedza, zvisinei, kuti kubudirire muchirongwa ichi kambani yako kana bhizimisi yebhizimisi ichadikanwa kupa chimwe chinhu chinogona kutengwa kana kurairwa paIndaneti Source .